केपी ओली त्यस्ता पात्र हुन : जुन प्रधानमन्त्री भएर पनि अन्तरास्ट्रिय बेइज्जत सहनु परेको छ - शुभयुग
पत्रकार विनोद त्रिपाठीप्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर १३, शनिबार (४ महिना अघि)
आधुनिक नेपाल शुरु भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका भिमसेन थापा हुँदै अहिले केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा ओली मात्र त्यस्ता पात्र हुन , जुन प्रधानमन्त्री भएर पनि अन्तरास्ट्रिय बेइज्जत सहनु परेको छ ।
पद मै वहाल रहेर स्वंय प्रधानमन्त्री भ्रस्टाचारमा संलग्न भएको इतिहासकै बदनाम रेकर्ड ओलीले नै राख्न पुगे । संसारमा वहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोप बिरलै लगाइन्छ । तर नेपालको इतिहासमा ओली सबैभन्दा कलंक प्रधानमन्त्रीमा अन्तरास्ट्रिय बेइज्जत श्रेणीमा परे ।
यस्तो उदेक लाग्दो रहर किन लागेको होला !
नबोली नबोली खुरुखुरु काम गर्दै खराब र भ्रष्ट नेता-कार्यकर्तालाई कारबाही गर्दै गएको भए कस्ले रोकेको थियो होला र !
मैले त्यतिबेला भनेको थिएं, जब अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभाग , राष्ट्रिय अनुशन्धान लगायतका राज्यका स्वतन्त्र निकाय प्रधानमन्त्री माताहत लगियो , तब अब यो सरकारले धमाधम भ्रस्टाचार गर्न थाल्यो भनेको थिएं ।
हो केहि देशमा यी मुख्य अड्डा कार्यकारी रास्ट्र प्रमुखको मातहतमा राखिन्छ । तर त्यहां हाम्रो प्रधानमन्त्री वरिपरि बिचौलिया र गुण्डाहरु जस्ता लुटेरा हुंदैनन । ती देशमा गल्ती गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई ढाकछोप गर्ने अरिंगाल कार्यकर्ता हुंदैनन । अनि अर्को कुरा जनता मार्नेगरि महंगी बढाएर त्यो देशको सरकार प्रमुखको इज्जत बढेको संसारमा कतै नजिर छैन है ।
मैले शुरुदेखि भनेको थिएं, खानेकुराको मुल्य बढाएर यो सरकार इतिहासमै कलंक प्रमाणित भयो । ओली सरकार गठन भएदेखि हरेक सामानमा १० देखि हजार प्रतिशतसम्म महंगी बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यो बेला ओलीका बिश्वासपात्र युबराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । अब यस्तो गंभिर गल्ती गरेपछि प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीहरु , सरकारसंग जोडिएका सबै ब्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेर जनताकै अदालतबाट कारवाही नगर्ने हो भने अर्को मन्त्रीमण्डलले पनि यस्तै अपराध गर्नेछ ।
अब लागौं, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको बारेमा । Transparency International को नेपाल chapter ले नेपाल भ्रष्टाचारको World वा Asia ranking मा कहाँ नेर प-यो भन्ने निर्णय लिने गर्दैन। यसको survey, मत सर्वेक्षण, data collection प्रशोधन र verification independent world team ले गर्ने गर्छ ।
TI को national पदाधिकारीहरु हुन्छन् , तिनलाई आँफू सम्बन्धित मुलुकबारे निर्णय लिन पाउने अधिकार हुँदैन। तर , G20 Think tank र UN का सबै जसो अंगको expert and independent consultant रहेको Transparency International लाई भ्रष्टाचार बिरुद्धको सबैभन्दा सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मानिन्छ।
नेपाल एशियामा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक देखिएको निर्णय TI का नेपाली पदाधिकारीको कुनै भुमिका छैन । आफ्नै देशको विबरण पठाएर रेकर्ड सार्बजनिक गर्ने अधिकार एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले त्यो अधिकार प्रदान गरेको छैन ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत स्वंय हाम्रा प्रधानमन्त्री उनका भ्रष्ट नेता, कार्यकर्ताहरुको कामको परिणाम हो ।
भ्रस्टाचार गरेर, महंगी बढाएर, जनतालाई रुवाएर , निर्दोष जनतालाई भोकै राखेर यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुने बुद्धि सम्माननिय प्रधानमन्त्री ओलीलाइ किन पलाएको होला ? यो कस्तो मति हो !